Keating oo dagaal cusub ka abaabulaya Somalia - iftineducation.com
iftineducation.com – Wakiilka Qaramada Midoobe ee Somalia Amb. Michael Keating ayaa wada qorshe uu dagaal kaga dhex abuurayo madaxda Soomaalida oo umuuqda qaar qabyaalada iyo sad-bursiga ay ku fogtahay.
Aqoon-yahan Maxamed Maxamuud Nuur Caalin oo ka faalooda arimaha Soomaaliya kuna nool dalka Finland ayaa isagoo u waramayay warbaahinta waxaa uu shaaca ka qaaday halista ku xeeran socdaalada Wakiilka Qaramada midoowe ee Soomaaliya uu ku tagayo gobalada dalka gaar ahaan kulamada gaar gaarka uu ula qaadanayo Madaxda Maamul-gobaleedyada dalka.
Caalim ayaa shaaca ka qaaday in Mr Keating markii uu gaaray Garoowe madaxda Puntland uu usheegay in si gaar ah loo eegi doono qaabka ay doorashada kaga dhici karto Soomaaliya iyo sida reer Puntland loo qancin karo maadaama ay diidan yihiin Nidaamka 4.5-ka.
Sidoo kale Aqoon-yahanka ayaa sheegay markii uu Michael Keating uu tagay Magaalada Baydhabo lana kulmay Shariif Xasan sheekh aadan uu shaaca ka qaaday in Somalia afarta Sano ee soo socota lagu xakumi doono 4.5.
“Kooxaha taageera Dowlada Federaalka Sida AU, UN, EU, IGAD, & Dalalka Talyaaniga, Ethiopia, Kenya iyo Uganda dhamaan dan Soomaali ma wadaan waxaa umuuqda madaxda qabyaalada ku fog tahay iyo sidii ay u fushan lahaayeen danahooda gaarka ah war aaway waxgaradkii Soomaaliyeed maxaa aamusiyay”ayuu yiri Caalim.
Ugu dambeyn Caalim ayaa walaac ka muujiyay Mustaqbalka Soomaalida maadaama dalka uu gacanta ugu jiro Siyaasiyiin iyo Ajinabi dano gaar ah leh.